भीमकाय ढुंगोबाट जोगिएका धनबहादुर भन्छन्- भाग्यले बाँचियो! :: राजेश घिमिरे :: Setopati
भीमकाय ढुंगोबाट जोगिएका धनबहादुर भन्छन्- भाग्यले बाँचियो!
शाखा सडकले पहाड कमजोर बनाएर राजमार्गमा पहिरो बढ्यो: इन्जिनियर
चितवन, असार १८
त्रिशूली नदीमाथि सडकको डिलमा चिया पसल चलाउने धनबहादुर परियारले चौधकिलोको पहाडबाट निस्कने मूलको पानी प्रयोग गर्न थालेको २० वर्ष बढी भयो। अटुट आइरहने मूलको पानी उनीहरूका लागि बरदान नै थियो। मंगलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षासँगै उनीहरूले धारो बनाएको ठाउँ वरपर धेरै मुहान पलाउन थाले। बुधबार सडक माथिको पहाडबाट अस्वभाविक रूपमा पानी बग्न थाल्यो।
बिहीबार अपरान्ह त बिस्तारै साना ढुंगा पनि खस्न थाले। धनबहादुरले संकेत पाइहाले। त्यहाँ जोडिएको धारो र धारोसँगै राखिएका मुडाहरू जोगाउन गए।
‘लगभग १० मिनेट लगाएर धारो निकाल्ने, मुडा सार्ने काम गरें। घरमा आएर त्यतै हेर्दै श्रीमतीसँग गफ गर्दै थिएँ, डाँडो त गर्ल्याम्मै झरिहाल्यो,’ उनले सुनाए, ‘पहिले साना ढुंगा र माटो खस्यो एक छिनमा यो ठूलो ढुंगो गर्ल्याम्म झर्‍यो।’
उनले आफू फर्किएको ५ मिनेटमा पहिरो झरेको बताए।
‘मलाई भगवानले बचाउनुभयो। हाम्रो परिवार यहीँनजिकै थियौं, पहिरो झर्दा आत्तियौं, धन्न कसैलाई केही भएन,’ उनले लामो श्वास ताने।
धनबहादुरको पसल पहिरो झरेको ठाउँबाट २० मिटर पर छ। पहिरो झर्दै गर्दा धनबहादुरका ज्वाइँ पनि नजिकै ट्रकमा थिए। नारायणगढ-मुग्लिन सडकअन्तर्गत यहाँ गाडी चलिरहेकै थिए।
‘धन्न त्यतिखेर कुनै पनि गाडी यहाँ आइपुगेन, ज्वाइँ भएको ठाउँसम्म पनि पहिरो पुग्न पाएन,’ धनबहादुरले भने, ‘हामीलाई भाग्यले बचायो, ठूलो दुर्घटना टर्‍यो।’
२० वर्षदेखि यही सडकको छेउमा बस्दै आएका उनले यो सडक खण्डमा यति ठूलो ढुंगो पहिरोमा झरेको कहिल्यै नदेखेको बताए।
सडकमा झरेको लेदो हटाइए पनि ठूलो ढुंगा हटाइएको छैन। सो ढुंगा फुटाउन ‘रक ब्रेकर’को आवश्यकता पर्ने भएकाले समय लाग्ने सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ। उक्त स्थानमा अझै पनि लेदो खस्न रोकिएको छैन।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर शिव खनालकाअनुसार यो ढुंगो करिब ३४ घनमिटरको छ। यसको तौल अन्दाजी ८२ टन छ।
‘मैल यहाँ काम गरेको ७ वर्ष भयो यति ठूलो ढुंगो सडकमा खसेको थाहा पाएको थिइन,’ उनले भने, ‘तीन वटा रोडर लगाउँदा पनि यो ढुंगोलाई धकेल्न मुस्किल पर्छ।’
उनले मुग्लिनतर्फ रहेको रहेको रक ब्रेकर पाँच किलोको पहिरोका कारण आउन नसकेका कारण हेटौंडाबाट मगाइएको बताए।
‘त्यो आइपुगेपछि साँझसम्म फुटाउन सुरू हुन्छ होला,’ उनले भने।
बुधबार र बिहीबार दिउँसो यो सडकमा आधा दर्जन बढी पहिरो खसेका थिए। बिहीबार चारकिलो, पाँचकिलो र केराबारी भन्ने ठाउँमा झरेको पहिरो पन्छाएको केही बेरमा चौधकिलोमा पहिरो झरेको हो।
पहिरोले केही समय बन्द भएको सडक रातिदेखि एकतर्फी खुलाइएको थियो।
चौधकिलोको पहिरो पन्छाउन नपाउँदै सोही सडकको जलविरेनजिक अर्को पहिरो खस्यो। बिहान ७ बजेतिर खसेको त्यो पहिरोले ट्रकको आधा भाग र बसको छेउको भाग पुरिदिएको थियो। पछि चारकिलो र पाँचकिलोमा पुनः पहिरो खस्यो। पाँचकिलोको पहिरो पन्छाएर एकतर्फी बनाइएपनि चारकिलोको पहिरो ठूलो भएकाले पन्छाएर सकिएको छैन। चारकिलोमा अहिलेसम्मकै ठूलो पहिरो झरेको खनालले बताए।
किन बढ्दैछ पहिरो?
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर शिव खनाल पछिल्लो समयमा पहिरोको क्रम बढ्नुको कारण सडकभन्दा माथिल्लो भागमा हुँदै गरेको विकासलाई ठान्छन्। उपल्लो क्षेत्रमा बन्दै गरेका संरचनाले राजमार्गमा पहिरो झर्ने क्रम बढेको उनी बताउँछन्। उनकाअनुसार स्थानीय तहहरूले राजमार्गसँग जोडेर गाउँतर्फ जाने शाखा सडक बनाउने क्रम बढाएकाले त्यसको असर पर्न थालेको हो।
‘चितवन र धादिङ क्षेत्रका राजमार्गमा यो समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सडकको ट्रयाक खोल्ने क्रम धमाधम चलिरहेका छन्। सडकबाट तल फालिएको ढुंगा, माटो लेदो बनेर राजमार्गमा आइरहेको छ।’
उनले बन्दै गरेका सडकका साथै अन्य संरचनाको पनि असर राजमार्गमा परेको बताए। पुराना सडकहरुमा पनि पानी बग्ने नाली छैनन्। ती सडकहरुमा पानीले खोलेर बगेको लेदो राजमार्गमै आइपुग्छ।
‘चौधकिलोमा त्यसभन्दा माथि अविनास ह्याचरीले बनाउँदै गरेको संरचनाको असर पनि परेको छ, राजमार्गभन्दा माथि नयाँ सडक पनि बनेको छ,’ खनालले भने, ‘यो क्षेत्रमा पहिले पहिरो जान्थेन, अब कमजोर भयो।’
हरेक वर्ष ठूलो पहिरो झरेर दुःख दिने गरेको चारकिलो क्षेत्रको भने भौगोलिक बनावट नै कमजोर रहेको उनले बताए।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १८, २०७८, ०३:००:००
कलेजो प्रत्यारोपण अन्तिम विकल्प हो, नियमित जाँच गराए औषधिले निको हुन्छ (भिडिओ)
स्थानीय तहको चुनावबारे प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार बोलाए सर्वदलीय बैठक
वायुसेवा निगम निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सञ्चालकहरूलाई बैठक प्रवेशमा रोक
जमिनदारको हत्या गर्ने छोरा बचाउन हिँडेका बुबाको कथा, हेर्नुहोस् युट्युबमा
स्थानीय तहको चुनावबारे सरकारले आयोग र संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने
हामीले नदेखेको दरबार
सहरबाट बियर र चाउचाउ बोकेर आउने गाडीमा कागती पठाउने गाउँपालिका अध्यक्ष
काठमाडौँमा तीन व्यक्ति मृत फेला
सप्तरीबाट लागुऔषधसहित तीन जना पक्राउ
उपरथीद्वय पाण्डे र खड्काको कार्यकाल थप, उजुरी दिएका कार्कीले अवकाश पाउने
आगामी चुनावमा 'एआई' को खतरा! सुन्दर पाण्डे
कोरोनाले बालबालिकामा कस्तो प्रभाव पारेको छ? पवनकुमार भट्ट
सामुदायिक स्कुलका शिक्षकको व्यावसायिक विकास कसरी गर्ने? कल्याण अधिकारी
नेपालमा भूकम्पपछिकाे पुनर्निर्माण सफल कि असफल? भरत चालिसे
समयको संगीत रुपसिंह भण्डारी
आमा, यसपालि पनि दिदीले छोरी पाइछन्! नारायण भट्टराई
सुभाहाङ टेकेन्द्रराज चेम्जोङ
पत्र लेखुँ कि प्रेमपत्र लेखुँ? अग्रिम पौडेल